Nin lagu tuhunsan yahay falal argagixiso oo gacanta booliska ku sii jiri doona – The Voice of Northeastern Kenya
Nin lagu tuhunsan yahay falal argagixiso oo gacanta booliska ku sii jiri doona
Star FM September 7, 2016
Nin looga shakisan yahay in uu xiriir la leeyahay kooxaha loogu yeero argagixisada islamarkaana ay booliska si aad ah ugu dawajireen ayaa gacanta ciidaamada ku sii jiri doonaan muddo dheerad ah si loo soo dhamestiro baaritano lagu hayo.
Mwandego Mohamed, ayaa la rumeysan yahay in uu ka yimid dalka Uganda waxana lagu xiray tuulo lagu magacaabo Zibani shalay oo talaada ahayd, waxana ninkaasi gacanta ku soo dhigeen cutubyo katirsan ciidaamda loo yaqano Flying Squadka oo ka kala socday Magaaloyinka Kwale iyo Mombasa ee gobolka xebta ee dalka.
Mohamed ayaa lagu amray in xabsiga uu ku sii jiro muddo 14 malmood ah taas oo ka dambeysay kadib markii Madaxa ciidamada dambi baarista degmada matuga Stephen Muli, uu xaakinka maxkamada uu kasoo hormuqday eedeysanahan ka dalbaday in gacanta lagu siihayo.
Laamaha amaanka ayaa waxay sheegen in ninkan lagu soo helay bam gacmeed iyo aalado kale oo qarxa .
Xaakinka maxkamada Magaalada Kwale Cosmas Maundu ayaa ku amray ninkaasi in isbitaal la geeyo maadamada uu xanuun la ildaran yahay iyadoo dhageysiga kiiskisa dib loo dhageysan doono 22-ka bishan September.
← Senetarada oo kasoo horjestay in gudigii loo xil saaray xil ka qaadista gavanaha Nyeri
Maxkamad kutaalo London oo Xukun ku riday nin lagu eedeynayo falal xagjirnimo ah →